Umkhiqizi Nefektri Yekhofi KaReishi Black |Wuling
I-Brix (%): 0
Amakhowe e-Reishi aqukethe ama-Beta Glucans (polysaccharides), ama-carbohydrate amaketanga amade angenye yezinhlanganisela ezisebenza kakhulu kumakhowe aqinisa amasosha omzimba.Ama-Beta Glucans nawo asekela impilo yamathumbu, engaholela ekugomeni okungcono.Ukusekela amasosha omzimba aqinile kubalulekile uma uzama ukuzivikela emakhazeni kanye nomkhuhlane.
I-Reishi mushroom, evame ukutholakala njengesithako esiyimpuphu, isetshenziswe iminyaka emithini yaseMpumalanga.Isetshenziselwe ukusiza ukuthuthukisa amasosha omzimba, ukunciphisa ukucindezeleka, ukuthuthukisa ukulala, nokunciphisa ukukhathala.
Ilungele izinhlobonhlobo zokudla: I-Vegan, i-Keto, i-Paleo, i-Whole30, abangani abangenalo ubisi noma abangenalo i-gluten.
● Sekela amakhasimende omkhiqizo omusha we-R&D, Wonke Ikhofi Lekhowe Lokwelapha.
I-Instant Juncao Reishi Premium Cafe Style Black Coffee iwumkhiqizo wekhofi wangempela omnandi.Okwenza i-Black Coffee ikhetheke kakhulu ukwengezwa kwekhwalithi ephezulu ye-Ganoderma Lucidum powder extract, i-Mushroom Ebomvu ecebile ngokumangalisayo enikeza amandla, isiza ukuxosha ubuthi emzimbeni, futhi isiza ngobumnene ekuqedeni.Lolu uhlobo lwekhowe okuthi uma lomisiwe liqine lifane nobhontshisi wekhofi omisiwe.I-Ganoderma Lucidum inambitheka ngisho njengekhofi futhi ithuthukisa ukunambitheka okugqamile, okucebile kukabhontshisi wekhofi we-premium esiwusebenzisa ekuhlanganiseni.Kulula ukuyilungiselela futhi kulula ukuyiphatha.
Nikeza amandla engeziwe namandla, ukukhathala kancane, futhi ukwandise amandla obuchopho kuvuseleleke futhi kukwenze uzizwe umncane futhi uphapheme Qinisa izitho zokususa udoti kanye nokukhipha ubuthi Qinisa amasosha omzimba Khuthaza ukulala kahle ebusuku.
Okwedlule: red vegan lingzhi reishi akhiphe capsules
Olandelayo: I-100% ye-Organic Ganoderma Extract Capsules